Company Hordhac - Juancheng Tianma Rubber & caaga Co., Ltd.
☆ Sannadkii 2008, waxaan ka heli Shahaadada Ammaanka ee Ansixinta Waayo Macdanta Products.
☆ Sanadkii 2010, shirkadda ka diiwaan gashan "CHENWANG" summad.
☆ In 2011, waxaan helay shahaadada tuubada shahaadada dhoofinta.
☆ In 2014, waxaan ku maray nidaamka maaraynta tayada ISO9001 caalamiga ah: 2008.
Ka dib markii in ka badan toban sano horumarka joogta ah, shirkadda hadda daboolayaa meel ka mid ah 40,000 oo mitir oo laba jibbaaran oo uu leeyahay 15,000 oo mitir oo laba jibbaaran workshop caadiga ah. gebi Waxaa jira 100 shaqaalaha iyo in ka badan 10 injineerada, oo ay ku jiraan 5 injineerada sare. Shirkadda ayaa ciidamo xoog leh farsamo, qalab tooling fiican, complete qalabka baaritaanka, technology-soo-saarka sare iyo
habka maareynta tayo kaamil ah. Our awoodda wax soo saarka sanadeedku waa 6million mitir tayada xasilloon oo lagu kalsoonaan karo.
Shirkadda dhaqmayso falsafadda ah technology-keentay, oo tayo leh, dad-oriented ugu horeysay, iyo adeega bulshada. Waxaan diyaar u ah inay gaaraan iskaashiga guul-guul la saaxiibo ka dhammaan qaybaha nolosha yihiin.